China Industrial Control Board အလှည့်ကျအလှည့်ကျစက်ရုံနှင့်စက်ရုံ။ | Kaisheng PCB
PCBFuture သည် PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများကပံ့ပိုးထားသော ESD ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ESD စစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအပြည့်အစုံရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း PCBFuture သည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်များပြားလာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုအမြဲတမ်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခြေခံပစ္စည်း: FR-4 tg135
သတ္တုကုတ်အင်္ကျီ: ခဲခဲ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ: SMT + အလွှာများ - ၂ အလွှာ PCB
အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်း: FR-4 tg135 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: SGS, ISO, RoHS MOQ: မရှိပါ MOQ
ဂဟေဆက်အမျိုးအစားများ - ခဲ (RoHS လိုက်နာမှု) One-Stop န်ဆောင်မှုများ: အနိမ့်အသံအတိုးအကျယ် PCB ပရိသ စမ်းသပ်ခြင်း: ၁၀၀% AOI / E-test / Visual Test
သော့ချက်စာလုံးများ - PCB Assembly Service, PCB Assembly လုပ်ငန်းစဉ်၊ PCB လူ ဦး ရေ၊ PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူများ၊ Turn-Key
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PCB တပ်ဆင်န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်?
၁. Turn-Key တဝက်တွင် PCB များနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်မှာယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများတွင်အစိတ်အပိုင်းများနေရာချထားမှုသည်တိုက်နယ်နှင့်စက်မှုဗိသုကာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ PCB ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်။
၂။ PCBFuture သည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောရှင်းလင်းသော PCB များနှင့်ပုံနှိပ်တိုက်ဘောင်တပ်ဆင်ခြင်းများကိုအလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးနိုင်သည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်ကိုအယူအဆမှသည်ထုတ်လုပ်မှုအထိဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စီမံကိန်းသည်မည်မျှပင်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာမိတ်ဖက်ဖြစ်ရန်လိုသည်။
ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB ပရိသ
၁။ တစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတုပစ္စည်းများအားဈေးပေါပေါ ၀ ယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သငျသညျမူရင်းစက်ရုံသတ်မှတ်ထားသောအေးဂျင့်များနှင့် Dejie, Mouser, Arrow ကဲ့သို့သောအခြားတရားဝင်လမ်းကြောင်းများမှ ၀ ယ်ယူသင့်သည်။ ;
2. ၀ ယ်ယူထားသောပစ္စည်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ BOM နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရမည်။
၃။ ဖောက်သည်သည်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များမရှိပါက ၀ ယ်ထားသောပစ္စည်းများသည်တရားဝင်ထုတ်လုပ်သူများကအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ပြီးအရည်အသွေးကိုလည်းအာမခံသည်။
၄။ ၀ ယ်ယူထားသောပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျလည်ပတ်ရန်အတွက်စစ်ဆေးရမည်။
၅။ ၀ ယ်ယူထားသောပစ္စည်းများသည်မသင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုကြောင့်စိုစွတ်မှုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်တော်သောသိုလှောင်ထားသင့်သည်။
၄။ PCBA ပြုပြင်ခြင်း၏စျေးနှုန်းသည်အတော်လေးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစျေးကွက်များတွင်သင်အနိုင်ရရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီခြင်း၊ ဂရုပြုခြင်းနှင့်တက်ကြွသောချဉ်းကပ်မှုဖြင့်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းများအတွက်, သင်သည်သူတို့ကိုအများဆုံးတတ်နိုင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကဆက်သွယ်ပါsales@pcbfuture.com ငါတို့သည်သင်တို့ ASAP သင်ပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ FPGA အမြန်နှုန်းတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့စည်းဝေးပွဲ
turnkey ညီလာခံ PCB
အဓိကဘုတ်အဖွဲ့ PCB ညီလာခံတရုတ်